Himalaya Dainik » फ्यानको दिल धड्काउने टाइगर श्राफको ‘फिट बडी’ ! हेराैँ २० तस्बिर
एजेन्सी- अभिनेता आयुष शर्मालाई टाइगर श्राफका फिटनेस ट्रेनर विक्रम स्वैनले तालिम दिने भएका छन्। फिल्मका लागी आयुषले १० देखि १२ किलोसम्म आफ्नो वजन बढाएका छन्। ।
मंगलबार फ्लाट बेन्च इनक्लान बेच्न, डम्बल प्रेस, चेस्ट फ्लाईका चार देखि ८ रेप्सका १२–१२ सेट्स गर्छन्। बुधबार १९० केजी वजनसँग स्क्वाट्सका चार सेट्स गर्छन्। ९० केजी वजनकासाथ ह्यामस्ट्रिंग्सका चार सेट्स गर्छन्। ९० वजनसँग स्टेप–अप्सका चार सेट्स गर्छन्। बेयरबल्सका चार सेट्स गर्छन्।
पछिल्लो समय शारिरीक रूपमा निकै सुगठित टाइगरको सगठित शरिरले हजाराैँ फ्यानको दिल धड्काएको छ । खास गरेर युवती त झनै फिदा नै हुन्छन् । यसै क्रममा सामाजिक संजालबाट उनका केहि तस्बिर प्रस्तुत गरेका छाैँ ।
साथिसंग घुम्न गएका संजयले यसकारण चिसापानी पुलबाट हामफाले….
भोली यी ४ राशिको लागि असाध्यै फलिफाप छ दिन